केरौंजाका भूकम्प पिडित मनाङमा मजदुरी गर्दै - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
केरौंजाका भूकम्प पिडित मनाङमा मजदुरी गर्दै
Published On : १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०८:५५
२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले घरबारविहीन गोरखा केरौँजाका भूकम्पपीडित अझै मनाङमा ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका छन् । घरबार र आफन्त गुमाएपछि कुम्लोकाम्लो बोकेर मनाङ पसेका गोर्खाली अहिले मजदूरीमा व्यस्त छन् ।
भूकम्पले गाँस र बास हराएपछि भूकम्पपीडित गाँसबासको खोजीमा मनाङ छिरेका थिए । आफ्ना साना नानी काखी च्यापेर मनाङ पसेका पीडित ज्याला मजदूरी गरेर गुजारा चलाइरहेका छन् ।
अहिले ती भूकम्पपीडित मनाङको भ्रका, पिसाङ, ङावोल, घ्यरु र खंसारमा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरु दैनिक ६०० देखि ७०० कमाउँछन् । दिनभर मजदूरी गरी कमाएको पैसाले छाक टार्न मात्र पुग्ने गरेको गोरखा केरौँजाकी माया गुरुङले बताइन् ।
भूकम्पले घर भत्काएर घरबारविहीन भएका पीडितले अहिलेसम्म सरकारले पहिलो किस्ताको ५० हजार दिएको राहतले कुनै गर्जो नचलेपछि आफूहरुले ज्याला मजदूरी गरेर पेट पाल्न बाध्य भएको बताउँछिन् ।